トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Faa'iidada iyo faa'iido darrada inuu shaqaalayaal u kireeyo lacag maaliyadda macaamiisha
Sida meel inaad soo amaahato lacag, waxaa jira mid sida loo isticmaalo maaliyadda macaamilka ahayn bangiyada. Xataa
CM iyo magazine beerta advertising sida, waxaan wada arkay magaca shirkada, waa inaad dadka sidoo kale dad badan in.
Sidaas daraaddeed, ma waxaad wada leeyihiin wax maxay yihiin faa'iidooyinka iyo khasaaraha inaad soo amaahato lacag ee maaliyadda macaamilka?
maaliyadda macaamilka ku saabsan faa'iidooyinka isticmaalka maaliyadda macaamiisha ah, ama hore loo yaqaan dahab Sarah ah, in ka mid ah xirfad ku ah fanka ama loo yaqaan Machikin.
hadda waa, ama xiriir la leh bangiga, on top waa fududahay in la isticmaalo waxaana laga yaabaa in u dhigmaan codsiga ah ee Internet-ka, dad badan oo sida lagu kalsoonaan karo xirfad ah ee farshaxanka ma codsatay doonaa amaahashada.
2 mid ka mid ah kuwa soo socda in faa'iidooyinka adigoo isticmaalaya sida maaliyadda macaamiisha loo daliishaday doonaa.
ula qabsan kartaa caching xawaaraha kharashka lama filaan ah
The first to la soo sheegnay waa sida faa'iidooyinka
maaliyadda macaamiisha waa caching xawaaraha. Gaaban ka codsiga
, si aad ku dhameysan kartaa baaritaanka ee ku saabsan 30 daqiiqo ilaa 1 saac, taas oo kuu sahlaysa sidoo kale waa la heli karaa haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah.
Tani waa waxa uu noqday suurtagal ah la dhalashada ee mashiinada amaah saarnayn. Xataa haddii uu jiro dukaan lahayn dhow
, aad diiwaan baaritaanka la isticmaalayo mashiinada amaah saarnayn ku yaalla magaaladii ku wareegsan.
halkan, ka dib markii buuxinta dokumentiyada lagama maarmaanka ah, laakiin iyaga waran fuliyay baaritaanka on telefoonka kula qofka mas'uul ka, wakhtigaas ayaa sidoo kale ayaan loo qaadan Karin ku saabsan 30 daqiiqo.
More dhawaan, sidoo kale waxay leedahay tiro sii kordhaysa oo ka mid ah shirkadaha diiwaan amaahda ka sida telefoonada smart. qaado oo keliya ayaa ka soo galo taariikhda
dhalashada iyo goobta shaqada iyo dakhliga, ee si fudud loo samayn karaa dib u eegaan codsigaaga waa faa'iidooyinka. Waraaqaha loo baahan yahay ka dib markii baaritaan
waa laga gudbay, in lagu daro diraya ka mashiinada heshiis la saarnayn, waxaa kale oo suurtogal ah in la sameeyo nidaamka by mail.
si sahlan loo fahmo oo u fudud in bixinta ka nidaamyada
Haddii aad amaahato lacag ee
maaliyadda macaamiisha, baabi'inta baahida loo qabo in damiin iyo rahaamad sida caadiga ah.
it on, iyo inay la soo wareegto tiro dhowr jeer ah in badan oo ka mid ah heshiiska, marka la barbar dhigo waxyaabaha sida xaqiijinta iyo sida loo fulinayo ka dib markii ay dib u eegaan qaaday, nidaamka dhibic waa mid fudud waa run iyo faa'iidooyinka. Tan iyo
oo keliya habka fudud, in waqtiga firaaqada ah, ayaa sidoo kale diraasad la fulin karo codsiga in sida telefoonka ama internetka. Haddii
in this, waxaa jira walwal ku saabsan Barre qoyska iyo saaxiibada.
Waxaa sidoo kale wax yaabahan in uu noqday fudud sidoo kale habka bixinta. Waxa intaa dheer in daaweyn by suuqa kala
, ka dibna aad ka ATM ee dukaanka joogin bixiyo, waxaad ku bixin kartaa dukaanka nolasha ATM iyo bangiyada Internet sannadihii la soo dhaafay.
sidoo kale maalmaha ka badan kuwa shaqaalaha xafiiska mashquul, waxaa haboon dareemi doonaa abaalmarin karaa iyada oo aan la sii cadaadisay muddo.
dulsaarka halkii habka xawaaraha waxaa kordhay
La sheegay dusha khasaaro ah in ay isticmaalaan Maliyada macaamiisha
, waa height ee dulsaarka. Inkastoo aysan rahaamad
iyo damaanado, waxaa la dhigay xaddiga sare ee lacag ka badan intii caadiga ahayd si loo yareeyo khatarta ururinta.
Intaa waxaa dheer, in ay ku xerin in mabda 'dib u bixisid in maamulaha isku midka ah iyo qandaraas xiisaha, ayaa la kiisas badan oo waqti aad u bixiso noqdo dheer. Markaad eegto oo kaliya lacagta bixinta
bil, 3000 yen iyo 5000 yen iyo yar ee si, dadka aan yarayn in aad u badan isticmaalka CATAPULT.
, si kastaba ha ahaatee, ma xitaa haysan lacag kugu filan sida bixinta isku day degdegga ah, in kiisas badan oo dib u bixisid oo kaliya bil walba lacagta ugu yar ee lacag, noqotaa foom, sida lacagta oo kaliya danta, ayaa sidoo kale la rumeysan yahay in weli ka maqan yareeyo maamulaha . Sidaa darteed
talinaynaa kiiska, ka faa'iidaysanaya xilli dulsaarka 0.
Tani waa, in ay dhacdo kuwii amaahashada markii ugu horeysay uu bixiyay bishii kowaad, dulsaarka ka dhigan tahay qorshaha si ay u noqdaan 0 ah, waa qorshe xad aasaasiga ah waa in maaliyadda macaamiisha.
By hayo xitaa haddii celinta xaddiga lacagta in la abaabulay ilaa xad sida laga yaabaa in aan la bixiyay bishii kowaad, mar dambe xitaa bixinta waa daahsan, waxa ay awoodaan in ay ka fogaadaan khatarta ah qallalku galay jabka noqon doonaa.
Faa'iidooyinka isticmaalaya maaliyadda macaamiisha
waa in la fulin karo in ay dib u eegaan oo amaahda ka codsiga in muddo gaaban.
qaadan dhowr kun oo yen inta lagu jiro maalinta ahaantii, waxaa laga odhan doonaa in ay u noolaadaan qayb ku wajahan in kara.
Dhanka kale in, in dulsaarka ayaa lagu wadaa sare iyo, maamulaha waa adag ka yar la soo daabici doonaa waqtiga lacag bixinta. Si loo soo bandhigo xataa CM of
maaliyadda macaamiisha, in ka dib si uusan noqon mid xanuun badan, aynu isku dayaan in ay macquul ah qorshaha bixinta jirin.
Intaa waxaa dheer, talinayaa in aad ogaatid dhab ahaan haddii uu jiro qorshe kasta oo ay u noqon, ka macaamilka maal kasta oo bogga internetka ah sababtoo ah ma aysan dhicin.
Nakaniwa, waxaa laga yaabaa in kaamilka habka bixinta si ay u doortaan qorshe si iyaga u gaar ah. Waxaa si caqli ku noqon
si caqli ah amaahan, maaliyadda macaamiisha haddii ay macquul tahay inoo noqon doonaa xulafo xooggan.
la xidhiidha faa'iidada iyo khasaaraha of lacag amaahashada ee bangiga /